कुरीतिविरुद्ध ‘मैनदानी’- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
असार १८, २०७६ सुशीला तामा‌ङ
काठमाडौँ — भनिन्छ, कुनै पनि सिर्जना कोरेपछि स्रष्टाको निजी धारणा मर्छ र त्यसको व्याख्या व्यक्तिअनुसार फरकफरक हुन पुग्छ । ग्यालरीमा प्रदर्शनरत चित्रप्रतिको धारणा पारखीअनुसार फरकफरक हुन सक्छ । एउटा कविताको समालोचना दृष्टिकोणअनुसार भिन्नाभिन्नै हुन सक्छन् । यस्तै बहुल चिन्तन पद्धतिको वकालत गर्दै राजधानीको अनामनगरस्थित मण्डला थिएटरमा नयाँ नाटक ‘मैनदानी’ मञ्चन भइरहेको छ ।
प्रख्यात रूसी साहित्यकार एन्टोन चेखबको छोटो कथा ‘द वर्क अफ एन आर्ट’ बाट प्रभावित ‘मैनदानी’ एकजना कलाकारको सिर्जनाप्रति फरक पृष्ठभूमिका मानिसले राख्ने फरक धारणामा आधारित मात्रै छैन, तिनै फरक धारणामार्फत समसामयिक सामाजिक प्रवृृत्ति र चिन्तनप्रति व्यंग्यसमेत गरिएको छ । सिक्का इन्टरटेन्टमेन्टको प्रस्तुति रहेको नाटकमा मानिसको कलाप्रतिको भिन्नभिन्न विश्लेषण र त्यसको प्रभाव पनि देखाइएको छ । समाजमा विविधता छ । हाम्रो सोच र दृष्टिकोण एक अर्कामा एकदमै फरक छ । हामीलाई राम्रो लागिरहेको वस्तु अर्कोलाई नराम्रो लाग्न सक्छ । डाक्टर हुँदै वकिल, गायकसम्म पुगेर पुन: डाक्टरकै हातमा मैनदानी आइपुग्दासम्मको दृश्यलाई नाटकले भावुकतासँगै रोचक बनाएर प्रस्तुत गरेको छ ।
केशव नामक एक पात्रको घरमा मूल्यवान् सम्पत्तिको नाममा केही हुन्न । डाक्टरले आमाको उपचार नि:शुल्क गरेबापत बदलामा दिने ऊसँग अरु केही नभएपछि उपहार स्वरूप उनले घरकै मूल्यवान् मैनदानी दिन्छ । त्यो उपहार राख्ने हिम्मत कसैको हुन्न । उपहारै स्वरूप र्‍यापर जोजोसम्म पुग्दा त्यसले निम्त्याएको समस्यालाई नाटकले प्रतीकात्मक रुपमा अर्थ्याएको छ ।
नाटकमा क्यान्भासमा रमाएका कलाकारहरूको पारिवारिक जीवनदेखि संगीतमा शिखर चुमेका कलाकारहरूको जीवनको यथार्थतालाई पर्दामा उतार्ने कोसिस गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई चर्चामा पुर्‍याउनेदेखि धराशायी बनाउनसम्म मिडियाले खेलिरहेको भूमिकालाई पनि नाटकले व्यंग्यात्मक रुपमा उठाएको छ । एउटा कलाको रुपमा जोजोले सजाएर राखेको मैनदानीलाई मिडियाले यौनसँग दाँजेर स्क्यान्डल बनाइदिन्छ र उसको करिअरमाथि खेलबाड गर्छ । अहिले गुणात्मकभन्दा पनि संख्यात्मक रूपमा आइरहेका मिडियाहरू र विषयवस्तुप्रति उनीहरूको संवेदनशीलताप्रति नाटकले प्रश्न उठाउँछ । पत्रकारिताको न्यूनतम मूल्य र मान्यताको ज्ञान नभए पनि प्रविधिको सहजताका कारण धमाधम खुलिरहेको न्यु मिडिया र युट्युब च्यानलहरूका लागि नाटक एक पाठ सावित हुने छ ।
कलाकारको सिर्जनामाथि जसको जस्तो धारणा भए पनि त्यसको मौलिक पहिचान र महत्त्व नमेटिने नाटकका परिकल्पनाकार तथा निर्देशक संयोग गुरागार्इं बताउँछन् । उनको यही भावका कारण नाटकमा हस्तान्तरणकै क्रममा मैनदानी पुन: केशवकै हातमा पुगेर डाक्टरलाई दिइन्छ । जोजो पात्रलाई विद्रोही बनाएर आम मानिसलाई समाजसँग लड्न नाटकले प्रेरणा दिएको छ । समाजका लागि व्यक्तिले आफूलाई परिवर्तन गर्नुभन्दा समाजको धार नै परिवर्तन गर्न लाग्नुपर्ने सन्देश छ नाटकमा ।
साउन ५ गतेसम्म मञ्चन हुने नाटकमा अंकित खडका, सागर खाती, देविन चौधरी, रिजन परियार, आयान खडका, जेनी सुनुवार, निकिता आचार्य, इंगिहोपो कोइँच सुनुवार, मिलन कार्की, देविशा लामिछाने, विकास पन्तलगायतले अभिनय गरेका छन् ।
प्रकाशित : असार १८, २०७६ ०८:४४
आखिर यो देश कसको ? आधुनिक विकासका नमुनाहरू कसका लागि ? नाटकले अर्को गम्भीर प्रश्न गर्छ । जस्तो कि सहरमा ठूलाठूला भवन र महल छन् । बाटो हिँड्ने बटुवाका लागि भने चाहेको बेला शौच गर्ने एउटा शौचालय पनि छैन । पिउने पानी त धेरै परको कुरा । उता शौच गर्न पाँच रुपैयाँ खर्च गर्नुको सट्टा भट्टीमा गएर मदिरा सेवन गर्ने निम्न
वर्गीय चरित्रका आफ्नै कथा व्यथा छन् । रक्सीको गिलास हुँदै मृगौलाको रोगसम्मको यात्रा हाम्रै समाजभित्र भेटिने पात्रहरूकै कथाजस्तो लाग्छ ।